Dhizaini Ndicho Chinyararire Mumiriri weBrand Yako | Martech Zone
Dhizaini inokanganisa inogona kukubatsira kupfuura vakwikwidzi vako. Zvinoenderana ne Dhizaina Management Institute, makambani akasarudza dhizaini inokatyamadza akaonekwa achikunda mamwe makambani nemaitiro asina kusimba pane indekisi yeS & P ne219%.
Pane rimwe divi, Ongororo yaTyton Media yakagumisa zvakare kuti 48% yevanhu vanoona kutendeseka kwebhizinesi kuburikidza newebhusaiti dhizaini. Aya matanho anoenderana nepfungwa yemukurumbira graphic dhizaini, Paul Rand uyo akafunga dhizaini semumiriri akanyarara weako brand.
Zvakare, dhizaini inogadzira inoenderana mutauro wekuona uye nekukasira kubatana kune ako zvigadzirwa kana masevhisi, zvinowedzera yako brand kuvimbika uye kuzivikanwa. Saiye muridzi wekambani, iwe unofanirwa kugadzira iyo inogara inoratidzika. Ndipo panogadzirwa dhizaini uye inoita kuti iwe ubatanidze uye unakidze vatengi vako kana vateereri vateereri.
Iyo yakanaka dhizaini ine typeface, color scheme, nguva yekutakura, uye nhare-inoshamwaridzika maficha. Izvi zvinhu zvinogona kuwedzera mikana yako yekugamuchira yakawanda traffic kuwebhusaiti yako.
Nei Dhizaini Yakakosha?
Maziso emunhu anoda chete 2.6 masekondi kutarisa chimwe chinhu chewebhu peji, vakapedzisa vaongorori kubva kuMissouri University yeSainzi neTekinoroji. Dhizaini-inoshamwaridzika dhizaini inogona kukanganisa maonero avo.
Vanhu vane [manzwiro] pamusoro pekambani yako zvinoenderana nezviitiko zvavakave nazvo nehara. Chinyorwa chakanyatsogadzirwa uye webhusaiti zvinokurudzira kuvimba nekuti zvinoita kunge nyanzvi. Kana kambani iri kuda kuisa pfungwa pakugadzira yakachena uye inoshanda dhizaini iri nyore kushandisa, ipapo icho chingave chiri chiratidzo cheizvo kushandisa kwavo chigadzirwa kungave kwakaita.
Dhizaini yakanaka inoendesa meseji yako nenzira inoshanda kwazvo:
Dhizaini yakanaka inobatsira kutaurirana yako meseji, inodhonza huremu kutema kuburikidza neyekushambadzira chatter, uye kuronga ruzivo zvakanyanya kunyatso kune chaiyo musika wauri kuyedza kusvika. Kubudirira dhizaini uye mameseji basa tandem kuratidza kukosha kwebhizinesi rako zvinonzwisisika uye, zvakanyanya kukosha, zvinorangarirwa.
Lilian Crooks, Graphic Designer uye Nyanzvi Yezvekutaurirana kuHarcum College
Ziva kuti dhizaini yakanaka haina kuganhurirwa kune webhusaiti kana logo. Iwe unofanirwa kutarisa pane kurongedza kana chigadzirwa dhizaini zvakare. Kana zvigadzirwa zvako zvichitaurirana meseji yako, tsanangura hunhu hwako uye kukwezva kune vako vateereri, iwe ungangogadzira mhando inotyisa.
Dhizaini Yakanaka Inokubatsira Iwe Kumira
Iyo dhizaini inogona kugadzira kana kutyora rako bhizinesi. Kana ichimanikidza uye ichishanda, unogona kumira pakati pevanokwikwidza. Haisi chakavanzika chekuti vanhu vanonamira kune zvigadzirwa zvine zvazvino uye zvinonakidza dhizaini.
Semuenzaniso, iwe pakupedzisira unozokwezva kune chaicho chigadzirwa chinoratidza zvinoshamisa dhizaini uye yemazuva ano kurongedza. Vanhu kazhinji vane maonero akasarudzika kurunako.
Vanhu vane hunhu hunokwezva; isu tinoona zvinhu zvakanaka sekuve zvirinani, zvisinei nekuti zviri nani. Zvese zvimwe zvakaenzana, tinosarudza zvinhu zvakanaka, uye tinotenda zvinhu zvakanaka zvinoshanda zvirinani. Sezvo mune zvakasikwa, basa rinogona kutevera fomu.
Steven Bradley, Munyori we Dhizaini Yakakosha
Zvakare, chidzidzo chakakurudzirawo kuti iwe unokwanisa kuongorora kutaridzika kunoonekwa mukati me50 milliseconds. Semugadziri, iwe unofanirwa kuita fungidziro, tora kutarisisa mukati meayo makumi mashanu mamirisikisi achitaurirana zvauri uye zvaunoita.
Iwe unonzwisisa iyo pfungwa nekutarisa kune zvigadzirwa zvekushambadzira; Anatomicals uye Cetaphil.
Cetaphil inoshandisa yakapfava, chirongwa chevara uye hapana anonakidza zvigadzirwa mazita, kuseta yakakomba toni. Mutsara wechigadzirwa wakagadzirirwa kuratidza kuti iyo mhando ndeye nezve chigadzirwa uye mashandiro ayo. Ipo, maAnatomicals anotsvaga anonakidza mazita echigadzirwa uye makuru font mhando.
Ivo vanoshandisa yakajeka mivara uye kumisikidza yakajeka-yemoyo toni. Iwe zvakare unofanirwa kutarisa pazvinhu zvakakosha zvaunoda kuratidza kune vatengi vako uye nekuona kuti zvinoratidzira mune chako chigadzirwa dhizaini.
Dhizaini Inokurudzira Brand Kubatana
Iwe unogona here kufungidzira Google ichiratidzira mitsva yekutsvaga uchishandisa mavara ekutuka kana logo yepink McDonald? Isu tinonzwisisa kuti zvakaoma kufunga nezve shanduko idzi.
Marongero eGoogle uye logo yaMcDonald zvinodarika zvekugadzira zvinhu. ivo chikamu chakakosha chechiratidzo chavo uye muenzaniso wakanaka wekuenderana kwechiratidzo.
Kugadzikana kwakakosha kana iwe uchida kuvaka chiratidzo chakabatana. Zviri nharo iwo musimboti mutemo unovimbisa iro rako rechiratidzo kubudirira.
Ose maviri marondedzero ataurwa akatarisa mukugadzira iyo inoenderana brand inosanganisira zvinhu zvisingakanganwike.
Inokurudzira kuzivikanwa kwechiratidzo kunotungamira mukubatana kukuru.
Inowedzera kukosha kwechiratidzo kunogona kukurudzira kutengesa.
Inokubatsira kuti umire kunze muindasitiri.
Kune rimwe divi, chiratidzo chisingapindirani chinoratidzika kunge chisina kugadzikana, chisina kurongeka uye chinovhiringidza. Izvo zvinogona zvakare kudzikisira kuvimbika kwebhizinesi rako uye kudzikisira mikana yako yekubudirira.
Zvakare, iwe unofanirwa kufunga nezvechako sechiratidzo chekambani yeruzhinji. Naizvozvo, inofanirwa kuratidza hunhu hwakanakisisa hwekambani yako kana bhizinesi kuti uite vateereri.
Zvakare, kuisa logo yako panjodzi ichishandiswa zvisirizvo kana kuti mavara ayo achishandurwa zvakasununguka zvinotungamira mukusaenderana. Vanhu vanowanzo kanganwa mhando isingaenderane. Nekuti havagone kufunga nezvemamwe mavara kana chiratidzo pavanotaura nezvazvo.
Semuenzaniso, kana uchitaura nezve Coca-Cola, unogona kufungidzira kuti logo yaro ine ruvara rutsvuku kwariri. Uye paunosangana ne Nike logo, unogona kuiziva seyangu shangu kana nguvo yekugadzira mhando.
Nekudaro, kana vateereri vako vasingakwanise kubatanidza mamwe mavara neako marashi kana kusaziva logo yayo, ungangoda kushanda pane dhizaini, uye iite ienderane kuitira kuti vateereri vako vazvione nyore.
Garner Mutengi Kuvimba neMushandisi-inoshamwaridzika Webhusaiti Dhizaini
Iko hakuna kuramba kuti vamwe vanhu vanofambidzana nebhizinesi kekutanga kuburikidza newebhusaiti yayo. Naizvozvo, iko kufunga kunosiiwa newebsite yako kwakakosha zvakanyanya kuti utarise. Iyo yakanaka webhusaiti dhizaini inogona kubatsira kusiya zvinogara nekusingaperi kune vako vashanyi vewebhusaiti.
Mawebhusaiti ane dhizaini yakaipa haana kuvimbwa kana kushanyirwa chero kwenguva yakareba.
Yakashata interface dhizaini yainyanyo kuenderana nekukasira kurambwa uye kusavimba webhusaiti, "achiwedzera," Muzviitiko apo vatori vechikamu vasina kufarira zvimwe zvekugadzira saiti yacho yaisawanzo kuongororwa kupfuura peji rekutanga uye yaisatarisirwa seyakakodzera kushanyirwazve rimwe zuva… ”
CrazyEgg, Izvo Zvakanaka Webhu Dhizaini Zvine Basa Chaizvo?
Old Stock Webhusaiti
Itsva Yakasarudzika Webhusaiti
ichi kontrakta yekudenga muCentral Indiana havana kugamuchira imwechete inokwanisa kutungamira kubva kune yavo yekare saiti mugore rapfuura. Iyo saiti nyowani, yakagadzirirwa uye kuvandudzwa na Highbridge inogadzirwa anopfuura gumi nemaviri anotungamira anotungamira mwedzi wega kubva kuvhurwa - iine traffic imwechete. Kuita kwako, zviratidzo zvekuvimba, kutora chaiko kutora mifananidzo, uye nhaurirano yemurume inotaura yakananga kuvashanyi pasina kupokana kwemasevhisi anopiwa.
Kufuridzira Vatengi vane Inotarisisa Packaging Dhizaini
Kavha dhizaini yezvigadzirwa zvako kana zvinhu zvakafanana newebhu dhizaini. Vatengi vako vanobhadharira chigadzirwa kana sevhisi uye vanokurudzirwa nekurongedzwa mune zvese zviitiko.
Uyezve, Blink - bhuku raMalcolm Gladwell inokurukura iyo poindi zvakadzama kuti zvinowedzerwa kana zvishoma tweaks kune yekupakata dhizaini inogona kuumba mutengi maonero nezvechigadzirwa.
Zvakare, ivo vanofunga chigadzirwa sekubatanidzwa kweiyo kavha uye chigadzirwa.
Kana iwe ukawedzera gumi neshanu muzana yero kune yakasvibirira pane 15 UP kurongedza, vanhu vanotaura kuti ine yakawedzera lime kana remon kuravira, kunyangwe chinwiwa icho chaicho chakasiiwa chisina kubatwa. Pane gaba raChef Boyardee Ravioli, pikicha yekuvharika kwechiso chaicho chemunhu zvinokonzeresa hunhu kupfuura kungozadza muviri kupfura kana munhu wekatuni ... uye muHormel logo, kuwedzera chiputi cheparsley pakati pe 'r' uye 'm' inokonzeresa vatengi kuona zvigadzirwa sekuwedzera kutsva.
Iyi mienzaniso inoratidza kuti kurongedza kunokanganisa zvinoonekwa nevatengi, mhando uye kunyange kuravira kwechigadzirwa. Kana iwe ukanyatsocherechedza, iyo 7 UP muenzaniso inotaurira kuti vatengi vane hukama hwakasiyana kune yakatarwa hue uye kusanzwisisika kwekuita kwazviri.
Naizvozvo, kuita sarudzo dzakagadzirwa dhizaini dzinobatsira nemabatiro aunoitwa nevatengi, kuona nekupedza chigadzirwa chako.
Mashandisiro anoita Brand Kuchinja Kwavo Logo Kuwedzera Mushandisi Kubatikana
Batman Logo Nhoroondo
Vazhinji vakakurumbira vemabhuku emabhuku mavara ndevorudzi pachavo, kunyanya avo vakave neema cinematic franchise akavakirwa kwakatenderedza. Imwe yeakanyanya iconic magamba magamba ndiyo mitambo naBatman. Chiratidzo chinozivikanwa chebheti riri kubhururuka chakagadzirwazve kashoma kubva kutanga kwayo, ine logo nyowani yakaburitswa muna2000 ichiratidza chokwadi, chakasviba chimiro chehunhu hwainoratidza.
Wedzera Kuzivikanwa Kwechiratidzo neRogani Dhizaini
Chiratidzo chinogara chiri chinhu chakakosha chechero mhando. Dhizaini yayo inoda kuve inomanikidza asi inyanzvi. Mabhizinesi mazhinji anotadza kucherechedza kukosha kwekufunga zvakanaka uye kunokwezva logo dhizaini. Ivo vanowanzo enda kune zvakagadzirwa-kare marogo kana kusarudza nzira yekuzviitira iwe-wega.
Uyezve, kugadzira logo hakusi kwekusarudza hue dzakajeka uye yakasarudzika typography. Asi inofanirwa kuratidza yako brand, kutaurirana yako bhizinesi meseji, ine chaiyo font uye ruvara pendi. Ichokwadi kuti logo hombe inoratidza mufananidzo wechokwadi webhizinesi rako uye hunhu.
Chinyorwa chakareruka, chinowirirana, uye chisingakanganwike chinogona kubatsira. Kana iwe uri kuvhura brand kana kuronga kuisa chidimbu chitsva kune yako iripo logo, unogona kutarisa pane zvinoitika, chako chiziviso chitupa uye kukosha kuona kuti logo yako inovandudza kufarira kweako tarisiro vateereri kutenderedza yako brand.
FedEx Logo Nhoroondo
Tora logo yeFedEx semuenzaniso. Iko kushandiswa kweorenji uye yepepuru mavara anosanganisira positivity uye vibrancy. Ukanyatsocherechedza, museve unoratidzwa pakati pemavara E & X unotaurira kuenda kumberi.
Iwe unogona zvakare kuyedza kutarisa pazvinhu zvakakosha zvakadai uye uzviise mu logo yako zvine hungwaru kuti uite huvepo husingazivikanwe, kunyanya kana mhando yako iri yekambani yekutakura kana yekushambadzira. Asi usakanganwa kudzidza maitiro ekunyora copyright kuti uichengetedze kubva mukubiridzirwa.
Sarudza Brand Meseji neMavara
Wati wambofunga here kuti nei nyanzvi dzichisimbisa pakusarudza iro rakakodzera-dhizaini? Aya mavara anobatsira kududzira meseji yako uye kukurudzira kuzivikanwa kwechiratidzo.
Kana iwe ukasarudza nokungwarira, iyo pendi yemavara yeyako logo inobatsira mukumutsa iyo chaiyo mhando yemanzwiro. Semuenzaniso, Louis Vuitton anoshandisa dema ruvara mune yavo logo iyo inoita iyo yekutanga uye yakasarudzika brand.
Sarudza Mafonti Akakodzera
Mafonti ndiwo anozivisa logo yako uye ane chinangwa chaicho. Iwe unogona kugadzira mukusarudza kwako mafonti. Asi zvakanakisa kushandisa imwe font mune logo.
Paunenge uchisarudza mafonti eiyo logo yako, ziva kuti iwo akasimba anotorwa semunhurume fonti uye mavara ekutuka anozivikanwa semadzimai echikadzi.
Iwe unogona zvakare kufunga nezve kushandisa zvakapoteredzwa typeface sezvavanoratidzira kutarisirwa, kupfava uye unyoro.
Tarisa pane Maitiro Ekuumba
Wanga uchiziva here kuti chimiro chechiratidzo chako chine mukana wekuvandudza zita rako revo?
BMW Logo Yakatsanangurwa
Semuenzaniso, madenderedzwa dhizaini anoratidza positivity, nharaunda, kutsungirira kana kunyange hukadzi nepo masikirwo akaenzana kana iwo ane mitsara yakaoma uye yakapinza anotumira meseji yesimba, hunyanzvi, huremu uye kugona.
Kune rimwe divi, matatu dhizaini anogona kubatsira kuburitsa ine simba, zviri pamutemo kana zvesayenzi mazano.
Dhizaini Inogona Kubatsira Kuparadzira yako Target Vateereri
Iwe unoda kunanga musika wakasiyana here? Edza kugadzirisa kurongedza kwako kuripo. Kana iwe uine chako chinonyatso gadzira zvigadzirwa zvekuchengetedza zvevakadzi zvevakadzi, iwe unogona kuramba uchinongedza musika wevanhurume.
Iko hakuna kudikanwa kwekuchinja kukuru kune ako magadzirirwo. Uye kukwezva kune vehurume huwandu hwevanhu, unogona kusarudza zvakapusa dhizaini dhizaini.
Semuenzaniso, Nivea inopa huwandu hwezvigadzirwa zvekuchengetedza zvemunhu, zvinosanganisira mafuta, mafuta ekuzora kana zvinwiwa zvinodhaka kune vakadzi. Zvakare, iwo mucherechedzo wakakwanisa kusiyanisa musika wavo nekunangisa huwandu hwevanhurume vachishandisa rakapinza uye dhizaini dhizaini.
Maererano ne Iyo Dhizaini Kanzuru kudzidza, dhizaini yekuzivisa mabhizinesi angangogadzira zvigadzirwa zvitsva kana masevhisi kaviri kana achienzaniswa nemabhizinesi asingatarise pane dhizaini chinhu. Naizvozvo, funga nezve kwaunogona kutora yako mhando nekuita mashoma stylistic gadziriso.
Kuisa Mari Mukugadzira
Pasina mubvunzo, dhizaini inogona kuve nemhedzisiro pane rako bhizinesi kana brand. Zviripachena kuti dhizaini yakanaka inounza mabhenefiti akasiyana siyana, anosanganisira kukwikwidza pamucheto, zvinonakidza musika mhedzisiro uye nekukuita kuti umire kunze kubva muboka revanhu.
Sevamiriri vechiratidzo chako, dhizaini inobatsira mukuvaka kuvimba kwevatengi, kunongedza musika mutsva, kusimudzira kusagadzikana kwechiratidzo, kuita zvinokatyamadza, uye kutanga mishandirapamwe yakabudirira, nezvimwe. Naizvozvo, zvakanakisa kutarisa dhizaini uye zvinhu zvinoita kuti zvibudirire. Nekuti kuisa mari mukucheka-kumucheto dhizaini kunoreva kuisa mari mukubudirira kwako kwenguva refu.
Kuzivisa: Ichi chinyorwa chakagadziridzwa kuti chibatanidze hukama hwehukama pamwe nemuenzaniso wevatengi kubva Douglas Karryakasimba, Highbridge.
Tags: kupiswaadriana marinanatomicalsdirector directorbatman logo nhoroondobrand kuvimbikaKuzivikanwa kwechiratidzoCetaphilcoca-colacolor colormutengi kuvimbapatanidhizaini dzakakoshadhizaini manejimendi manejimendikugadzira kutsvakurudzadhizaini yekudzidzagooglegoogle brandharcum korejililian crookslogologo mavaralogo dhizainilogo chimirologo yemupdonaldmissouri yunivhesiti yesainzi uye tekinorojinikePaul matavirechigadzirwa chigadzirwaSteven Bradleytypefacetyton midhiyamutauro wekuona
Anas Hassan mubatsiri wezve dhizaini pane inotungamira inomiririra agency Logo Poppin. Iye ane hushamwari hwakadzama mukutsvaga maitiro e graphic dhizaini uye kushambadzira kwedhijitari. Kunze kweizvi, anofarira nhabvu fan uye anonakirwa neapo neapo nyama yemabiko.
Kubudirira Kwakaita Sei Kuvimbika Zvirongwa Dhiraivha Kunzwisisa uye Maitiro Ehupfumi